Darpan Nepal – यसकारण मानिसलाई सुतेको समयमा झट्का लाग्ने गर्छ : थाहा पाउनुहोस र समस्याबाट छुटकरा पाउनुहोस
यसकारण मानिसलाई सुतेको समयमा झट्का लाग्ने गर्छ : थाहा पाउनुहोस र समस्याबाट छुटकरा पाउनुहोस
Jul 12, 2018adminIntresting fact0Like
कतिपय मानिसहरुमा सुतेको समयमा एक्काशी झट्का महसुस हुने गर्छ । यसले गर्दा गहिरो निन्द्रामा रहेका मानिसहरुको निन्द्रा बिग्रने गर्छ । एकप्रकारको मांशपेशीमा हुने झट्का हो जुन हामी निन्द्रामा मस्त भएको केही समय पछि मात्र हामीलाई महसुस हुने गर्छ । यस्तो समस्या कहिलेकाँही मात्र देखापर्ने भएकाले मानिसहरु यसलाई समन्य रुपमा लिने गर्छन् । तर यदि यो समस्या बारम्बार देखा पर्यो भने हामीले यसलाई सामान्य रुपमा लिन हुदैन । यो अरु कुनै समस्याको कारण भएको हुनसक्छ ।
झट्का लाग्नुको केही कारणहरु यस कारण छन् :
१) आइरनको कमी : साँझको समयमा धेरै एक्सरसाइज गर्दा तथा क्याल्सियम, म्याग्नेसियम एवं आइरनको कमी हुँदा यस्तो झट्का बारम्बार महसुस हुने गर्छ ।
२) निद्राको कमी : जब हामी सुत्ने कोसिस गर्छौं तब हाम्रो मस्तिष्क अर्धचेत अवस्थामा रहने गर्छ । यस्तो अवस्थामा मस्तिष्कको आधा भाग सकि्रय रहन्छ । त्यसबाहेक सुत्दा नमिलेमा वा अप्ठ्यारो गरी सुतेमा समेत यस्तो झट्का महसुस हुने गर्छ ।
३) उत्तेजित पार्ने तत्व : नसालाई उत्तेजित पार्ने औषधीका कारण वा चिकित्सकको सल्लाहविना सेवन गरिएका विभिन्न औषधीहरूको प्रयोगले पनि हाइपनिक जर्क हुनसक्छ ।
४) मांसपेशीको ऐँठन : कतिपय अवस्थामा मांसेपेशीमा हुने ऐँठनका कारण पनि हाइपनिक जर्क हुने गर्छ । विशेषगरी, मांसपेशीमा ऐँठन भएमा शरीरमा घर्षण पैदा हुन्छ, जसका कारण मांसपेशीबाट आवाज निस्कन्छ र शरीरले झट्का महसुस गर्छ ।
५) निद्रा र अनिद्राबीचको अवस्था : सामान्यतया सुतिरहँदा हाम्रो मस्तिक निद्रा र अनिद्राको बीचको स्थितिमा रहने गर्छ । यो यस्तो स्थिति हो, जसमा मस्तिकले गहिरो निद्रा लिने भरपूर कोसिस गरिरहेको हुन्छ । यो मस्तिष्कको संक्रमण काल पनि भएकाले यही अवस्थाका कारण शरीरले बारम्बार झट्का महसुस गर्छ ।
सानै देखी बालबच्चालाई कसरी सुधार्ने ? हरेक अभिभावकले यो पढ्नुस
भारतका प्रख्यात शिक्षाशास्त्री गिजुभाई बधेका (सन् १८८५-१९३९) ले शिक्षकका रुपमा आफ्नो पूरा समय बालमैत्री शिक्षाकै लागि खर्चिए । गुजराती भाषाका यी शिक्षासेवीले आफ्नो अनुभव र प्रयोगबाट बालबालिकाका लागि उपयोगी शिक्षण विधिको परिकल्पना गरे ।
बालबालिकाको सही विकासका लागि सही शैक्षिक वातावरणको कुरा उठाउँदै त्यसमै केन्द्रित रहेर उनले धेरै पुस्तक पनि लेखेका छन् ।
पुस्तकहरुमार्फत उनले बालबालिकाको सार्थक सिकाइ र विकासका लागि घरको वातावरण महत्वपूर्ण हुनेमा अभिभावकको ध्यानाकर्षण गर्दै शिक्षकलाई समेत जिम्मेवार हुन आग्रह गरेका छन् ।
बालबालिकालाई कसरी हुर्काउने र कसरी शिक्षा दिने भन्ने उल्लेख गर्दै गिजुभाईले औंल्याएका केही बुँदा शिक्षा विमर्श नामक ब्लगबाट अनुवाद गरी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
घरमा बिग्रेको बच्चालाई भगवानले पनि सुधार्न सक्दैनन् !
आफैं गर्न दिनुस्
बच्चालाई आफैं काम गर्ने सोख हुन्छ ।
उसलाई रुमाल धुन दिनुस् ।
उसलाई भाँडामा पानी भर्न दिनुस् ।
उसलाई फूल सजाउन दिनुस् ।
उसलाई कचौरा मस्काउन दिनुस् ।
उसलाई मटरकोसाको दाना निकाल्न दिनुस् ।
उसलाई खानेकुरा पस्किन दिनुस् ।
बच्चालाई सारा काम आफैं गर्न दिनुस् ।
उसको आफ्नो मर्जीले गर्न दिनुस् ।
उसको आफ्नो ढंगले गर्न दिनुस् ।
हाम्रो आँखामा अमृत छ वा विष,
हाम्रो बोलीमा मिठास छ या टर्रोपन,
हाम्रो स्पर्शमा कोमलता छ वा कठोरता,
हाम्रो मनमा शान्ति छ वा अशान्ति,
हाम्रो मनमा आदर छ वा अनादर,
बच्चा यी कुरा तुरुन्तै पत्ता लगाउँछन् ।
बच्चा हामीलाई एकदम जानिसक्छन् ।
‘सुत, नत्र अहिले बाबाजीले पक्रेर लैजान्छ !’
‘खाऊ, नत्र चोरले लिएर जान्छ ।’
‘बाघ आयो !’
‘बाबाजी आयो !’
‘पुलिस आयो !’
‘चुप लाग, नभए कोठामा बन्द गरेर राख्छु ।’
‘पढ्न बस, नत्र पिट्छु ।’
जो यसरी बच्चालाई डर देखाउँछन्, उनीहरु बच्चाहरुका दुश्मन हुन् ।
यदि हामीले बच्चाहरुलाई आफ्नो घरमा उचित स्थान दियौं भने,
हाम्रो पृथ्वीमा नै स्वर्गको सृष्टि हुन सक्छ ।
स्वर्ग बच्चाको सुखमा छ ।
स्वर्ग बच्चाको स्वास्थ्यमा छ ।
स्वर्ग बच्चाको प्रसन्नतामा छ ।
स्वर्ग बच्चाको निर्दोष मस्तीमा छ ।
स्वर्ग बच्चाको गीत र गुनगुनाइमा छ ।
बच्चाको शरीर सानो छ, तर उसको आत्मा महान् छ ।
बच्चाको शरीर बढ्दो छ ।
बच्चाको शक्ति विकासशील छ ।
तर, उसको आत्मा त पूर्ण छ ।
हामी त्यो आत्मालाई सम्मान गरौं ।
आफ्नो गलत रीति र नीतिबाट हामी बच्चाहरुको शुद्ध आत्मालाई प्रदुषित नपारौं ।
बच्चा सम्पूर्ण मनुष्य हो ।
बच्चामा बु​द्धि छ, भावना छ, मन छ, आफ्नो बुझाइ छ ।
बच्चामा भाव र अभाव छ, रुचि र अरुचि छ ।
हामी बच्चाका इच्छाहरु चिनौं ।
हामी बच्चाका भावनाहरुलाई सम्झौं ।
बच्चा अबोध र निर्दोष छ ।
आफ्नो अहंकारका कारण हामी बच्चालाई तिरस्कार नगरौं ।
आफ्नो अभिमानका कारण हामी बच्चाको अपमान नगरौं ।
बच्चालाई आफैंले खानु छ, तपाई उसलाई नख्वाउनुस् ।
बच्चालाई आफैं नुहाउनु छ, तपाईं उसलाई ननुहाइदिनुस् ।
बच्चालाई आफैं हिँड्नु छ, तपाईं उसको हात नसमात्नुस् ।
बच्चालाई आफैं गाउनु छ, तपाईं उसलाई गाउन नलगाउनुस् ।
बच्चालाई आफैं खेल्नु छ, तपाईं उसको बीचमा नआउनुस् ।
किनकि बच्चा स्वावलम्बन चाहन्छ ।
यति पनि नगर्ने ?
गाना-बजाना गर्ने ठाउँमा जान छोडेर बच्चालाई बगैंचामा लैजानुस् ।
गफमा अल्झिनुको साटो बच्चालाई चिडियाखाना देखाउन लैजानुस् ।
अखबारमा मात्र अलमलिएर नबसीको बच्चाको कुरा पनि सुन्नुस् ।
राति सुत्ने समयमा बच्चालाई असल कहानीहरु सुनाउनुस् ।
बच्चाको हरेक काममा गहिरो चासो देखाउनुस् ।
बच्चालाई यस कारण सम्मान गर्नुस्, ताकि हामीमा आत्मसम्मानको भावना जागोस् ।
बच्चालाई गाली गर्ने, तर्साउने नगर्नुस्,
जसले गर्दा गाली गर्ने र तर्साउने हाम्रो खराब बानी छुट्दै जाओस् ।
जसले गर्दा मारपिट गर्ने हाम्रो पशु–वृत्ति नष्ट हुन सकोस् ।
यसरी आफूलाई सुधारेर नै हामी आफ्ना बच्चालाई सही रुपमा विकास गर्न सक्छौं ।
डर र लोभ
आमा, बुवा र शिक्षकले बुझिराख्नुस्
पिटेर वा लोभ देखाएर बच्चा सुध्रिन सक्दैनन्,
बरु उल्टै बिग्रिँदै जान्छन् ।
पिटेपछि बच्चामा झन् उग्र भावना बढ्छ ।
लोभ देखाउँदा बच्चा लालची बन्छन् ।
डर र लोभका कारण बच्चा निर्लज्ज, थेत्तरो, जिद्दी र दीन-हीन बन्छन् ।
सुन्दर संसार: घर
यदि आमा-बुवाले आफूले जस्तोसुकै आचरण गरे पनि
आफ्नो बच्चालाई संस्कारी बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच्छन् भने,
त्यो ठूलो भूल हो ।
आमा-बुवा र घर, दुइटै संसारको
सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली चिजहरु हुन् ।
घरमा बिग्रेको बच्चालाई भगवान् पनि सुधार्न सक्दैनन् !
प्रकृतिबाट टाढा रहने बच्चाले प्रकृतिको विविधताबारे कसरी थाहा पाओस् !
झलमल्ल चन्द्रमा, कलकल बग्ने नदी,
परालको घर, पहाडको ढुंगा, आकाशको रंग र खुला हावा,
यी सबै ती उपहार हुन्, जुन बच्चालाई प्रकृतिबाट प्राप्त भएका हुन् ।
बच्चालाई मन लागुन्जेल प्रकृतिको आनन्द लुट्न दिनुस् ।
बच्चा पल–पलमा बढ्ने प्राणी हो ।
बच्चाको दृष्टि हर समय प्रश्न सोध्ने खालको हुन्छ ।
बालकको हृदय केही बोलिरहने खालको हुन्छ ।
बच्चचाको व्याकरणमा प्रश्न र बोली हुन्छ ।
तर पूर्णविराम कतै पनि हुँदैन ।
बच्चाको अर्थ हो, निरन्तर गति-
जहाँ अल्पविराम समेत हुँदैन ।
आमा-बुवा र अरु ठूला मान्छेको झगडाको कारण
घरको वातावरण प्राय: अशान्त रहने गर्छ ।
यसले गर्दा बच्चा निकै दिक्क हुने गर्छन् ।
अरु केहीका लागि नभए पनि आफ्नो बच्चाका लागि भए पनि
हामी घरमा मिजासिलो रुपमा जीवन जिउन सिकौं ।
घरको शान्त र सुखी वातावरणमा नै
बच्चाको राम्रो शिक्षा पाउन सक्छ ।
जो पुस्तक पढेर ज्ञान प्राप्त गर्छन्, उनीहरु शिक्षक बन्छन् ।
जो बच्चालाई पढेर ज्ञान प्राप्त गर्छन्, उनीहरु शिक्षाशास्त्री बन्छन् ।
शिक्षाशास्त्रीको लागि प्रत्येक बच्चा
एक समर्थ, अद्वितीय र जीवित ग्रन्थ हुन् ।
तपाईं सारा संसारलाई धोका दिन सक्नुहुन्छ,
तर, आफ्ना बच्चाहरुलाई धोका दिन सक्नुहुन्न ।
तपाईं सबैलाई मूर्ख बनाउन सक्नुहुन्छ,
तर, आफ्ना बच्चाहरुलाई कहिल्यै मूर्ख बनाउन सक्नुहुन्न ।
तपाईं सबैलाई सबथोक लुकाउन सक्नुहुन्छ,
तर, आफ्ना बच्चाहरुलाई केही पनि लुकाउन सक्नुहुन्न ।
बच्चा सर्वज्ञ हुन्छन्, सर्वव्यापी हुन्छन्, सर्वशक्तिमान हुन्छन् ।
गफ दिनु बेकार छ
हामीले पढ्ने, सोच्ने र लेख्ने काम गर्दैमा
हाम्रो काम पूरा हुन्छ त ?
हुँदैन, हामीले त शिक्षाको नयाँ-नयाँ मन्दिरको निर्माण गर्नु छ,
र ती मन्दिरमा अहिलेसम्म अपुज्य रहेकी सरस्वती देवीको स्थापना गर्नु छ ।
बच्चाहरुको लागि नयाँ युगको आरम्भ भएको छ ।
केवल गफ गरेर केही पनि हुँदैन ।
केही गर्नुस् ! केही गराउनुस् !!
चैन कसरी मिलोस् ?
जबसम्म बच्चाहरुले घरमा पिटाइ खान्छ,
र, विद्यालयमा गाली सुन्छ
तबसम्म मलाई चैन कसरी मिलोस् ?
जबसम्म बच्चाहरुका लागि विद्यालय, पुस्तकालय, बगैंचा र खेलमैदान बन्दैन,
जबसम्म बच्चाहरुलाई प्रेम र सम्मान मिल्दैन, तबसम्म मलाई चैन कसरी मिलोस् ?
बच्चाहरुले प्रेम दिएर मलाई समृद्ध बनाए ।
बच्चाहरुले मलाई नयाँ जीवन दिए ।
बच्चाहरुलाई सिकाउने क्रममा मैले पनि धेरै सिकेँ ।
बच्चाहरुलाई पढाउने क्रममा मैले पनि निकै पढेँ ।
बच्चाहरुको गुरु बनेर मैले उनीहरुको गुरु-पद बुझ्न सकेँ ।
यो कुनै कविता होइन,
यो त मेरो अनुभवका कुरा हुन् ।
Previous Postभक्तपुरका कैयौं बस्ती डुबानमा, अथाह क्षति, ३ को मृत्यु, १५ घर ढले, ७ घण्टापछि खुल्यो राजमार्ग Next Postस्तन वृद्धी गर्नेदेखि मृगौला रोग नियन्त्रणसम्मको थाहा पाउनै पर्ने मेथीका १० फाईदा